Palmas Luxury Residence kunye 24/7 ukhuseleko
IResidencia Palmas yeyona ndawo ifanelekileyo ezolileyo onokuthi uyonwabele nosapho lwakho okanye nabahlobo bakho ukuze uphumle kwaye ukonwabele iiholide zakho. Ifumaneka kwimizuzu eli-15 ngemoto ukusuka edolophini ngaphakathi kuphuhliso lwabucala kunye nokhuseleko lwe-24/7.
Igumbi lokulala eli-4 ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala, igumbi lokuhlala, i-air conditioner / i-heater kunye nebhokisi yokhuseleko, i-tv enenkonzo yentambo kunye neelinen ezisemgangathweni ophezulu kunye neetawuli.
Indawo yokuhlala inechibi elishushu labucala elineepaneli zelanga, ipalapa, igrill, igumbi lokuhlambela kunye neshawari yangaphakathi nangaphandle.
Zonke iinkonzo zibandakanyiwe: iiglasi, iikomityi, izitya, iitawuli, iimpahla zokulala, njl.
Ikwanayo negumbi elongezelelweyo labagcini babantwana okanye abaqhubi abanegumbi lokuhlambela labucala kunye nekhabhathi.
Ukongeza, kukho indlu yeklabhu ekwabelwana ngayo kuphuhliso nelinye ichibi elishushu, indawo yokuzivocavoca, iholo yemidlalo yeqonga kunye neholo yemisitho. Le ndawo ibonelela ngenkonzo kuzo zonke iindawo zokuhlala.
Uphuhliso lwendawo yokuhlala yabucala enokhuseleko lwe-24/7, imizuzu eli-15 ngemoto ukusuka e-Oaxaca City edolophini. Uxolo, ukhuselekile kunye nako konke okudingayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho.
Sinikezela ngenkonzo yokucoca kunye nesidlo sakusasa yonke imihla phakathi kwentsimbi yesi-8 kusasa ukuya kweye-10:30 kusasa (oku kukhetho, nceda usazise ukuba ufuna sikunike iinkonzo, akukho ntlawulo yongezelelweyo).
Singakunceda nangasiphi na esinye isicelo onokuthi usifune ngexesha lokuhlala kwakho (ezinye iinkonzo/isicelo sinokuba nentlawulo eyongezelelweyo)
Sinikezela ngenkonzo yokucoca kunye nesidlo sakusasa yonke imihla phakathi kwentsimbi yesi-8 kusasa ukuya kweye-10:30 kusasa (oku kukhetho, nceda usazise ukuba ufuna sikunike iinko…